Is pregnant mother fit to fly? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Is pregnant mother fit to fly?
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတဈဦးဟာ ကနျြးမာရေးလညျးကောငျးပွီး အခွားဘာရောဂါပွဿနာမှမရှိထားဘူးဆိုရငျ ကိုယျဝနျသုံးလကနေ ခွောကျလအထိလယောဉျစီးလို့ရပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျဟာ လယောဉျစီးလို့ စိတျအခရြဆုံးအခြိနျဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့ကိုယျဝနျရှိစဉျမှာ spotting လို့ချေါတဲ့သှေးစအနညျးငယျဆငျးခွငျး၊ သှေးတိုးရောဂါနဲ့ာ ဆီးခြိုရောဂါရှိရငျတော့ ဆရာဝနျဆီကနေ အကွံဉာဏျတောငျးပွီးမှ လယောဉျစီးသငျ့ပါတယျ။ အရငျကိုယျဝနျမှာ စောမှေးဖူးတဲ့ ရာဇဝငျရှိရငျလညျး ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျဝနျ ၁၂ပတျကနေ နှဈဆယျ့လေးပတျအတှငျးဟာ ခရီးသှားဖို့အဆငျအပွဆေုံးပါပဲ။ မနကျစောစောမှာပြို့အနျခွငျးဟာလညျး သိပျမဖွဈတော့ပါဘူး။ ခှနျအားလညျးပွညျ့ဝတဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ လကွေောငျးလိုငျးတျောတျောမြားမြားဟာ ကိုယျဝနျ၃၇ပတျကြျောရငျ လယောဉျစီးခှငျ့မပေးပါဘူး။ အခြို့လကွေောငျးလိုငျးတှကေတော့ ကိုယျဝနျ၂၈ပတျကြျောရငျ ဆရာဝနျဆီကနေ ဆေးစာ/ခှငျ့ပွုခကျြ လိုအပျပါတယျ။ ခရီးသှားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ ကိုယျဝနျနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ဆေးမှတျတမျးတှအေားလုံးယူဖို့လိုအပျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှမှော ခွထေောကျသှေးကွောထုံးတတျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျထဲက သှေးတှကေိုမြားစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခွထေောကျကနေ တငျပဆုံပိုငျးကိုတကျတဲ့သှေးစီးဆငျးမှုကိုကစြပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သှေးကွောထုံးခွငျးအခနျ့မသငျ့ရငျဖွဈနိုငျပါတယျ။ လယောဉျစီးခွငျးဟာ ခွထေောကျသှေးကွောထုံးခွငျးဖွဈနိုငျခကြေို မွငျ့တကျစပေါတယျ။
လယောဉျစီးခြိနျမှာ ကွုံတှရေ့တဲ့ သဘာဝလထေုရဲ့ radiation ဟာ ကိုယျဝနျပကျြကနြိုငျပွီး ကလေးကိုဆိုးကြိုးရှိစတေယျလို့စဈတမျးအခြို့ကဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့အမွဲစီးနရေတာမဟုတျဘဲ တဈခါတဈလသောဖွဈတဲ့အတှကျ ခရီးသညျကိုယျဝနျဆောငျအတှကျ ဒီလိုဆိုးကြိုးဖွဈတဲ့နှုနျးကအလှနျနညျးပါတယျ။
*မိမိရဲ့ဆေးမှတျတမျးမြားအားလုံးကိုယူဆောငျသှားပါ။ ဒါမှသာ အရေးပျေါအခွအေနဖွေဈခဲ့ရငျ ရောဂါရာဇဝငျကိုသိနိုငျမှာပါ။
*လယောဉျအကွာကွီးစီးရလြှငျ ခွထေောကျကို မွှောကျလိုကျခလြိုကျလုပျပေးပါ။ ခွထေောကျဆနျ့ခွငျး၊ကှေးခွငျးပွုလုပျပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ဦးဟာ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းပြီး အခြားဘာရောဂါပြဿနာမှမရှိထားဘူးဆိုရင် ကိုယ်ဝန်သုံးလကနေ ခြောက်လအထိလေယာဉ်စီးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ဟာ လေယာဉ်စီးလို့ စိတ်အချရဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာ spotting လို့ခေါ်တဲ့သွေးစအနည်းငယ်ဆင်းခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါနဲ့ာ ဆီးချိုရောဂါရှိရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီကနေ အကြံဉာဏ်တောင်းပြီးမှ လေယာဉ်စီးသင့်ပါတယ်။ အရင်ကိုယ်ဝန်မှာ စောမွေးဖူးတဲ့ ရာဇဝင်ရှိရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် ၁၂ပတ်ကနေ နှစ်ဆယ့်လေးပတ်အတွင်းဟာ ခရီးသွားဖို့အဆင်အပြေဆုံးပါပဲ။ မနက်စောစောမှာပျို့အန်ခြင်းဟာလည်း သိပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခွန်အားလည်းပြည့်ဝတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းတော်တော်များများဟာ ကိုယ်ဝန်၃၇ပတ်ကျော်ရင် လေယာဉ်စီးခွင့်မပေးပါဘူး။ အချို့လေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်ကျော်ရင် ဆရာဝန်ဆီကနေ ဆေးစာ/ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါတယ်။ ခရီးသွားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေအားလုံးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာ ခြေထောက်သွေးကြောထုံးတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးတွေကိုများစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေထောက်ကနေ တင်ပဆုံပိုင်းကိုတက်တဲ့သွေးစီးဆင်းမှုကိုကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးကြောထုံးခြင်းအခန့်မသင့်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်စီးခြင်းဟာ ခြေထောက်သွေးကြောထုံးခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
လေယာဉ်စီးချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ သဘာဝလေထုရဲ့ radiation ဟာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်ပြီး ကလေးကိုဆိုးကျိုးရှိစေတယ်လို့စစ်တမ်းအချို့ကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမြဲစီးနေရတာမဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်လေသာဖြစ်တဲ့အတွက် ခရီးသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွက် ဒီလိုဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့နှုန်းကအလွန်နည်းပါတယ်။
*မိမိရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းများအားလုံးကိုယူဆောင်သွားပါ။ ဒါမှသာ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရင် ရောဂါရာဇဝင်ကိုသိနိုင်မှာပါ။
*လေယာဉ်အကြာကြီးစီးရလျှင် ခြေထောက်ကို မြှောက်လိုက်ချလိုက်လုပ်ပေးပါ။ ခြေထောက်ဆန့်ခြင်း၊ကွေးခြင်းပြုလုပ်ပေးပါ။